पुडासैनी आत्महत्या : कसरी चल्दैछ कारबाही ?
समाज , विशेष - रिपोर्ट
जनतापाटी डेस्क मंगलवार, भदौ ३, २०७६, २२:३५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनि लिएको स्वीकृति आज(मंगलबार) साँझ सकिँदै छ । मंगलबार प्रहरीले उनीहरलाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गरेको छ ।
अहिलेसम्मको प्रहरी अनुसन्धानले शालिकरामको आत्महत्या नै भएको भन्ने बताएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उनले आत्महत्या नै गरेको सावित भएको हो । घाँटीको हड्डी भाँचिएको साथै डोरीले घाँटी कस्सीएको पोष्मार्टम रिर्पोटमा देखाइएको छ ।
त्यस्तै प्रहरीको अनुसन्धानमा उनले डोरी किनेको पसल पत्ता लागेको छ । उनले कपडा सुकाउन भनि ५ मिटर लामो डोरी किनेका थिए । अहिलेसम्म प्रहरी अनुसन्धानले पत्ता लगाएका कुराहरुले उनको हत्या नभएर आत्महत्यनै हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा पुडासैनीले आत्महत्या नभएर कसैले हत्या गरि झुण्ड्याएको भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु आइरहँदा प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएका यी कुराहरुले यसलाई निराधार भएकाे प्रमाणित गरेको छ ।
पुडासैनीले आत्महत्या गरेको प्रमाणित भएको बताइरहेका प्रहरीले अनुसन्धानमा भने ढिलाई गरिरहेको छ । नियन्त्रणमा लिएको पाँचौ दिन मंगलबारसम्म पनि उनीहरुको बयान जारी छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार सोमबार तीन बजे र मंगलबार बिहान रवि लामिछानेसहित तीनै जनाको बयान लिइएको छ । अझै अनुसन्धानको काम बाँकी रहेकाले अदालतबाट फेरी थप समय माग्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्लले अनुसन्धान बाँकी नै रहेकाले थप समय मागिने बताए ।
उक्त प्रकरणमा संसदमा समेत कुरा उठिसकेको छ । भाद्र १ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दुई सांसदले घटनाका विषयमा ध्यानाकर्षण नै गराएका थिए । नेकपाका दुई सांसदले यो कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि संसदमा यो विषयमा कुरा उठेनन् । तर त्यसको अघिल्लो दिन भाद्र २ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छानविन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
देशमा व्याप्त प्रदर्शन र आन्दोलनका विषयमा प्रतिपक्षमा रहेका दलले कुरा उठाउनु सामान्य हो । यदि नेपाली काँग्रेसले यो विषयमा प्रेसर दिने हो भने यो केसमा पनि निर्मला बलात्कार केसको जस्तै विना कुनै समाधान टुंगिनेछ भन्ने कुरामा सतर्क रहेको देखिएको छ ।
तर यस विषयमा राजनीतिक दल अथवा अरु कुनै संस्थाले भाग लिएको छैन भन्न मिल्दैन । जसरी चितवनमा आन्दोलन भैरहेको छ यसले यो आन्दोलान स्वतन्त्र नागरिकले गरेको जस्तो देखिँदैन् । स्वः स्फुर्त भनिएको आन्दोलनमा एकै प्रकारका प्रचार नभेटिएकाले पनि यसको पुष्टि गर्छ । विश्वमै स्वतन्त्र रुपमा हुने आन्दोलनमा हातले लेखिएको प्रदर्शन सामग्री बोकिएको देख्न सकिन्छ ।
हुन सक्ने कारबाही
यस्तो केशमा अदालतले केही समय पुर्पक्षका लागि प्रहरीले मागेको समथ थप गर्नसक्ने देखिन्छ । साथै आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको प्रमाणित भयो भने ५० हजारसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४’ को दफा १८५ मा छ ।
तर आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको प्रमाणित केसमा समता अस्पतालका संचालक उत्तम संजेलकी श्रीमती लगायत तीन जनालाई तीनलाख जरिवानामा छोडिएको नजिर पनि रहेको छ ।
एकै दिनमा सन्सनी मच्चाउने त्यो हत्या वा आत्महत्या ? सामाजिक संजाल बहश शुक्रवार, श्रावण ३१, २०७६, ०५:०६:००
ओडारबाट घर फर्किदाको खुशीमा मान्ठ रामायणका मुख्य पात्र राम १४ बर्ष बनबास बसेर राम राज्य प्राप्ती गरेको कथन हामी सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । अहिले बाजुराका गरीबहरुमा बर्षौदेखि ओडारको बासबाट उन्मुक्ति पाउँदाको खुशीको सीमा छैन । बुधवार, जेठ १, २०७६, १५:०१:००
हामीलाई यो दिनले अझ पीडाबोध हुन्छः शहीद परिवार अहिले टोलटोलमै सरकार बने तर कुनै सरकारले हाम्रो छोराको माग पूरा गराएनन् । यही व्यवस्था ल्याउन छोराले ज्यान दियो, यही सरकारले हामीलगायत कुनै जनताको कुरो सुनेजस्तो लाग्दैन । बुधवार, बैशाख ११, २०७६, ०८:४७:००